I-Cast Cast yaseBattlestar Galactica: Iikloni
by UMark Wilson
Konke malunga neeModeli eziMisiweyo
Ukukhangela ukufunda kabanzi nge- Battle Galactica cast? Musa ukujonga ngakumbi njengoko sijonge phambili kwi-cast edlala iCylon.
I-Battle Galactica Cast: Iikloni
Kukho imizekelo elishumi elinambini yefom ye-cylons. Ezi sixhenxe, zonke ezaziwa phakathi kweeKylone ngokwezibalo, zaboniswa kubantu ngexesha lokulwa kwabo kwangaphambili emva kokuhlaselwa kweCylon kwii-12 zaseColoni. "Iingxelo ezi-5 zokugqibela" zathi zihluke ngokuthe ngqo, kwaye iimodeli ezilandelwayo zacwangciswa ukuba zingabalandeli; kodwa u-D'e, iNombolo yesiThathu, wayenemibono apho ebona khona. Iine zeZintlanu zokugqibela zityhilelwe omnye komnye ekupheleni kwexesha le-3, kwaye zibonakaliswe kubantu kunye neeCylon "kwiZityhilelo" (4x10).
UDean Stockwell njengeNombolo yokuqala (uMzalwan 'uCavil)
UCavil wabonakala kuqala njengelungu lobulungiseleli obelucebisa uTyrol ukuba afune ulandelelwano lwezinto zokubambisa, wambuza ukuba wayenguKylon. (UCavil waphendula, ngokusoloko ehlekisayo, ukuba iTyrol yayingeke ibe yiCylon kuba yayinye kwaye wayengambonanga kuyo nayiphi na iintlanganiso.)
I-Cavil isakhono esahlukileyo sokwenza amahlaya angomileyo asenzi nto yokumangalisa imfesane yakhe. Ngethuba lo msebenzi waseNew Caprica wayephikisana nokukhupha abantu; Wabeka zonke iziThathu kwisigwebo ngenxa yokufuna ulwazi lweSihlanu esiphelileyo; kwaye wazama ukutshabalalisa iiplone ezivukelayo ezikhokelwa yiiSixes kunokuba zivumele ukuba i-endlone yeCylons ibe yinto engathintekiyo.
I-Callum Keith Rennie njengeNombolo yesiBini (Leoben Conoy)
U-Leoben uyona nto ifilosofi yamaKyloni, kwaye unamandla okuphazamisa ukuphoqa umntu ukuba abuze umntu. Ekuqaleni uMlawuli we-Adama waphoqeleka ukuba achithe ixesha kwiinkampani zikaLebenben kwaye waba yinto ekhethekileyo yolu hlobo kunye nolwazi lwakhe.
U-Leoben unomdla kunye noKara Thrace, evakalelwa kwelinye iqela indima yakhe ebalulekileyo kwixesha elizayo leentlanga zawo zombini, kwaye uye wabonakala ngezihlandlo eziliqela kumceli aze amkhokele. Nangona ngezinye izihlandlo ezi zinto zidibene nazo, akazange amkhohlwe ukuvalelwa kwakhe ngethuba lo msebenzi, ngexesha apho wamnyanzelisa ukuba ahlale naye njengesiqabane aze azame ukufumana uthando lwakhe, nangona ezama ukuzama ukumbulala .
ULucy Lawless njengeNombolo yesiThathu (u-Anna Biers)
U-Anna wabonakala kuqala njengombonisi wefilimu owamkholisa uMlawuli we-Adama ukuba amvumele ukuba adubule ingqungquthela kumagosa oqhubi kwi-Galactica. U-Anna wayelokhu efuna ukuqonda kwexesha elizayo leKyloni, kuquka ne-Five Five. Ekugqibeleni embonweni ubunikazi beSigqithandathu Sokugqibela bebhaliwe, kodwa ekugwebeni zonke iiThathu zazingenayo "ibhokisi" (efakwe kwisitoreji).
AmaKyloni avukelayo, aholwa yi-Sixes, aqiniseka ukuba i-Final Five yayiza kuqonda indlela eya eMhlabeni kwaye ikhuphe ukuhlangula kwiThathu eza kuphelisa ekubhujisweni kweHlavus Resurrection, ekupheliseni ngokugqibeleleyo ikhono likaKylons lokuvusa. Omnye Owesithathu, u-Anna, wasinda, kwaye waqinisekisa ukuba izinto ezine zibonakaliswe njengengxenye yeZihlanu.
U-Rick ufanelekile njengeNombolo yesine (uSimon)
Inani leNine ngokuyinhloko liyeza. Ubonakala ngokugqithiseleyo ngexesha loluhlu njengogqirha epulazini eKaprica apho iKara Thrace ihlolwa khona, njengenxalenye yomdla wakhe kwiimeko zokuvelisa i-Cyano i-humanoid.
Kulo "cwangciso," kuvela apho kwakukho iNqwelwana yesine kwinqanawa eyayitshatile umntu kwaye yayingumzali-ntombazana kumntwana wayo; kwaye kwakuneyinye Inombolo yesine phakathi kwabavukeli abakhokelwa nguSam Anders kwiCaperica.
UMateyu Bennett njengeNombolo yesihlanu (uAron Doral)
Inombolo ezintlanu ibonakala kuqala njengentengiso kunye nobudlelwane boluntu, ohlala eGalactica malunga nokuguqulwa kwayo kumyuziyam ngexesha lokuhlaselwa kweCylon.
Kamva, elinye i-Five Number yenza njengebhomu lokuzibulala e-Galactica; Lo ngumcimbi ochaza ii-Cylone ze-humanoid kubantu bonke abasindileyo. Ngokuqhelekileyo, i-Fives iphakathi kweempawu ezingenabubele kubantu.
Tricia Helfer njengeNombolo yesithandathu
Inombolo yesithandathu, ubuhle be-statuesque, inendima ebalulekileyo ekuphuhlisweni kweeKyloni. Omnye weeSixes, owabizwa ngokuba yiCaprica Six, wancenga uGaius Baltar waza wafumana ukufikelela kwigridi yokukhusela abantu. Kodwa kamva waqala ukubuza umkhosi ongenakuphikelela phakathi kwabantu kunye neeKyloni.
Ukufuna ikusasa elitsha kwiiKyloni ngokubambana nokuzihlola kwabo njengamashishini, yakha inxaxheba yokuphikisa, ngokukodwa phakathi kweSixes kunye neEights, eyayikhokelela ekugqibeleni kwi-Civil ciment yase-Cylon kunye nabanye
Inani lezisixhenxe (uDaniyeli)
Inombolo yesixhenxe yayiyimodeli yokudala, yobugcisa eyadalwa nguMdali wesihlanu wokugqibela. Iibiloni zenza ukuba iNombolo enye ibe yintshontsho yeNombolo yeZisixhenxe, ngokuqinisekileyo ichithe ubukho bayo njengomzekelo osebenzayo.
Inombolo yesixhenxe ayikho ngexesha leemfazwe zaseCylon kwaye ayikho indima ekungquzululeni kunye nabantu (ngaphandle kokuyingxenye yeNkxaso yoMntu ngokumalunga ne-Final Five). Akazange abonwe kwisikrini ngexesha lokuqhuba 'iBatllestar Galactica,' kodwa igama lakhe lidibanisa noDaniel iGreystone, umlingiswa ophakathi 'kwiCaprica.'
IGrace Park njengeNombolo yesibhozo (uBomomer, uSharon "u-Athena" uAgathon)
Umqhubi womqhubi egumbini laseGalactica, uBomomer waqaphela ukuba wayengummeli waseCylon olalayo xa evuka ngelinye ilanga egaxa emanzini kwaye eqhubekile, ngaphambi kokuba iityanki zamanzi zikhuphe. Ubonakaliswe njengeCylon xa omnye u-Eight, owathandana noHelo eCaprica, wabuyela eGalactica.
UBomer wabulawa waza wakhala ngomsindo xa efumene evukile, engafuni ukukholelwa ukuba nguKylon. Ngelo xesha omnye uSharon wafumana ukuthembela koMlawuli we-Adama waza ekugqibeleni wavunyelwa ukuba ajoyine iinqanaba njenge-pilot, efumana isitizo se-Athena.
Phakathi kweeKyloni, ii-Eyes zihlangene ne-Sixes kwimfazwe yombango, kodwa uBomomer, eziva ehlukaniswe nomzekelo wakhe, wathatha icala likaCavil.
UMichael Trucco njengoSamuel Anders
USam wayengumdlali oye waba ngumkhokeli ochaseneyo phakathi kwabantu abathintela ukubulawa yiiKyloni ezihlala eCaprica. Edibana noKara ngethuba lemfihlo, uSam wabuyela naye eGalactica kunye neqela elincinci labasindileyo. Batshata kwiNew Caprica, bakha ukuxhatshazwa phakathi kweKara noLee.
Emva kokukhululwa uKara noSam babe nobuhlobo obushushu, kodwa uSam wahlala ethembekile kuKara kwaye wazama ukukunceda umzabalazo wokukhusela uluntu ngokujoyina kunye noqeqesho lokuba ngumqhubi.
Ukususela ekufumaneni ukuba wayeyiCylon Sam wayehlala esona nqanaba eliphezulu-engama-4, ekhuthaza ukuzola njengoko abanye babemelana neengxaki zabo - nakuba uSam wayeyika ukuba kwenzekani xa uKara efumene ukuba utshatile kwiCylon.
UMichael Hogan njengoSawule
Umhlobo omdala woMlawuli we-Adama, wayemdelela xa ephendukile ngokusela emva kokuhlaselwa kweCylon. Ukufika komfazi wakhe onothando e-Galactica izinto eziyinkimbinkimbi, kwaye xa wayephoqelelwe ukuba athathe umyalelo emva kokuba uAdama wadutshulwa umyalelo wakhe wawunjalo kwaye unomthwalo onzima wenza ukuba abantu abanjengoLee baxhathise.
Ngomyalelo wokuchaswa kweNew Caprica, Wayejika ekuzibhokozeni ngokuzibulala waza wabulala umfazi wakhe, owayethengise ulwazi kwiCavil ngokubuyisela unyango olungcono xa wayevalelwe. Emva koko wahola iintloko ze-vigilante ezababulala abadibeneyo. Okumangalisayo ukuba wayefumene ukuba yiKylon yamenza waba ligosa elithembekileyo nelithembekileyo kunanini ngaphambili.
UAron Douglas njengeGeorge Tyrol
Eyaziwayo kwihlabathi njengeNtloko, indlela eTyrol yayibonakala iyifanelekile ukuba inkundla yendiza yendiza ibe nolwazi olungapheliyo lweVipers kunye nezinye izinto. Ezo zibini kwaye zivukela, iTyrol yashiya intshutshiso yakudala kunye noSharon kwaye yabandakanyeka noCally, omnye wezakhono kwiqela lakhe.
Kwi-New Caprica eTyrol, ngoku sele etshatile kuCally kunye nendodana yintsana, yaququzelela abasebenzi baseburhulumenteni ukuphucula iimeko, kamva benza okufanayo kwi-ship mining. UTyrol, esele ecinezelekile ngomtshato wakhe kunye nokungabikho kokuxhamla nendodana yakhe (owayebonakala ekhala njalo ngexesha), waphenduka kakubi ngokufumanisa ukuba nguKylon.
Ngokuya ngokungaqhelekanga, uTyrol wanyanzelisa i-barroom yokulwa kunye no-Adama ekhokelela ekukhunjweni.
Rekha Sharma njengoTory Foster
U-Tory wayengumsebenzi wezopolitiko osebenzayo kunye nophando lokuvota owangena kwiNgqungquthela kaMongameli uRosslin, waba ngumncedisi wakhe oyintloko emva komncedisi wakhe wangaphambili, uBilly, wabulawa.
Uhlala ecaleni likaRosslin xa elahlekelwa ngumbongameli, encedisa uRosslin ukuba abone abadibaniselwano bokunyuswa komanyathelo; xa uRosslin ebuyela kwi-ofisi kaMongameli uTory uyaqhubeka njengoncedo lwakhe, nangona uRosslin eqonda ukuba uTory unxanelekile ukuba athembeke ngokupheleleyo.
Xa sele efumanisa ukuba yiKylon ibonakala ibona njengenzuzo, kwaye iyakhusela ngokubulala uCally emva kokuba ifumene ngeeKyloni ezine ezifihliweyo. Okwangoku uqala ukuya kwiintlanganiso zeBoltar ze-monotheism kwaye emva koko uxabela ubudlelwane bezesondo naye.
Kate Vernon njengoEllen Tigh
U-Ellen Tigh ubonakala kuqala njengoSaul Tigh umfazi onobuqili kwaye onqabileyo, ofika kwakhe kwiGalactica kubangelwa ukuba aphazamiseke.
Ngokunyaniseka kumyeni wakhe, ibonakalisa ukuba u-Ellen wanikela ulwazi kwiintshaba kwi-New Caprica eyayiphathe iNylon ukuze atshintshe isithembiso sokuba uSawule uza kusinda; USawule, ngenxa yoko, waba nomuzwa wokuthi wayengenanto yokukhetha kodwa ukumbulala ngenxa yokunyaniseka, kwaye wakhetha ukwenza oko ngokwakhe, isenzo esabangela ukuba intlungu yintlungu kamva.
Ngonyaka wesine kwabonakala ukuba u-Ellen Tigh wayeyiCylon yokugqibela kwaye wayesebenzisa isixhobo ekudaleni imizekelo yesibhozo elandelwayo, eyahlukeneyo.
Iimpawu kunye nokufakwa kweNtaba yeeInjini ezingaphumeleli
I-Haast's Eagle (Harpagornis)
Indlela Yokuvakalisa Iintononti zesiTaliyane